कञ्चनपुर र कैलालीमा ८ मध्ये ५ कांग्रेसले जित्ने :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
कञ्चनपुर र कैलालीमा ८ मध्ये ५ कांग्रेसले जित्ने
धनगढी । प्रदेश ७ का १६ सिटमध्ये आठ सिट कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै छन् । बाँकी सातवटा जिल्लामा आठ सिट छन् । यतिबेला सबै दल कैलाली र कञ्चनपुरलाई लक्षित गरेर चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । जसका कारण यी दुई जिल्लामा चुनावी दाउपेच र सरगर्मी निकै बढेको छ ।
कैलाली: पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा प्रदेश ७ को सम्भावित राजधानी धनगढीसमेत पर्छ । धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको क्षेत्र नम्बर ५ मा नेपाली कांग्रेसकी बौद्धिक एवं शक्तिशाली नेतृ डा. आरजु राणा देउवा उम्मेदवार बनेका कारण यतिबेला सिंगो कैलाली तातेको छ । यसै पनि कैलाली ५ नेपाली कांग्रेसका लागि मुलुककै सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हो । त्यसमाथि पनि कांग्रेसबाट आरजु जस्ती हेभिवेट उम्मेदवार बनेका कारण अन्य उमेदवारको खासै गणना छैन । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब दोब्बर मतअन्तरले चुनाव जितेको क्षेत्रमा यसपटक पत्नी आरजु उम्मेदवार बनेकी हुन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले दलित नेतालाई मेयर पदमा उम्मेदवार बनाउँदा पनि सानदार भोट ल्याएर जितेको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाका अलावा यो क्षेत्रमा कैलारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ र ९ पर्दछन् ।
नेपाली कांग्रेसको गढ हो भन्दैमा ढुक्क हुन नहुने भन्दै डा.देउवाले दोहो¥याई तेहो¥याई घरदैलो कार्यक्रम तथा मतदातासँग भेटघाट गरिरहकी छन् । उनी यसरी खट्नुका तीनवटा कारण रहेको बताइन्छ । पहिलो कारण हो, सबैभन्दा धेरै मतअन्तरले चुनाव जितेको रेकर्ड राख्ने । दोस्रो, एमालेले अघि सारेका उम्मेदवार रानाथारु समुदायको हुनु । तेस्रो कारण हो, डोटीबाट धनगढी झरेका दिनेश भण्डारी साझा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु । धनगढीमा डोटेलीहरूको बाहुल्यता छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा धनगढीको मेयर पदमा उम्मेदवार भएर सानदार मत ल्याएका गोपी हमाल पनि साझा पार्टीमा संलग्न छन् । तर उनीसँग चुनावमा लागेकाहरू कार्यकर्ता अहिले डा.आरजु देउवाको पक्षमा मत माग्न थालेका छन् ।
यस क्षेत्रको प्रदेश ‘क’ मा उम्मेदवार बनाइएकी जीवन रानाथारु लोकप्रिय पूर्व शिक्षिका भएकाले पनि डा. देउवालाई चुनाव जित्न सजिलो हुने बताइन्छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभा ‘ख’ मा उम्मेदवार बनाइएका अग्रज नेता डिल्लीराज पन्त पनि लोकप्रिय छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र एमालेकी गरिमा शाहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । तर प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसका उम्मेदवार लोकप्रिय र हेभिवेट भएका कारण गरिमालाई त्यति सजिलो छैन । प्रदेशसभामा निवर्तमान सांसद जनक चौधरी र रणबहादुर शाह कांग्रेसको तर्फबाट चुनाव लडेका छन् । टीकापुरकाण्डका रेशम चौधरी राजपाबाट चुनाव लडेकाले उनले केही भोट काट्ने अवस्था छ ।
क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसका मोहनसिंह राठौर र एमालेका झपटसिंह रावलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । राठौर २०७० सालमा एमालेको तर्फबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका थिए भने रावल उनकै पिए बनेका थिए । यसपटक आफ्नो पिएलाई टिकट दिएर आफूलाई फालिदिएपछि पीडा महसुस गर्दै राठौरले मनोनयनको अघिल्लो दिन कांग्रेस प्रवेश गरेर टिकट हात पारेका थिए । एमालेका करिब दुई हजार मतसहित कांग्रेस प्रवेश गरेका कारण राठौरले चुनाव जित्ने सम्भावना छ । तर यस निर्वाचन क्षेत्रमा अछामीहरूको ठूलो पकड र एकता छ, झपट रावल अछामी हुन् । त्यसो त प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले पनि अछामी बाहुल्य ठाउँमा हिमबहादुर रावललाई र थारु बाहुल्य ठाउँमा अरुणप्रसाद चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसबाट रामजनम चौधरी उम्मेदवार बनेका छन् । २०४८ सालयता लगातार सांसद भइरहने मुलुकका ६ जना नेतामध्ये रामजनम पनि एक हुन् । उनले चुनाव जित्ने कुरामा मतदाता ढुक्क छन् । प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले पुरन चौधरी र लक्ष्मण शाहीलाई उम्मेदवार बनाएका कारण पनि रामजनमलाई सजिलो भएको छ । उनका प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका उम्मेदवार गौरीशंकर थारु खासै लोकप्रिय छैनन् । यस क्षेत्रमा माओवादीको संगठन धेरै नै कमजोर छ ।
क्षेत्र नम्बर ४ मा कांग्रेसका सुनिलकुमार भण्डारी र माओवादीका लेखराज भट्टबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । सतहबाट हेर्दा भट्टले भण्डारीलाई आत्थुआत्थु पारेको देखिन्छ । तर भित्री रूपमा भने आफू निकै बलवान रहेको भण्डारीले बताएका छन् । प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले हीरादत्त भट्ट र यज्ञप्रसाद चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेका उम्मेदवार कृष्ण सुवेदी र दीर्घ सोडारीको तुलनामा कांग्रेसका उम्मेदवार भट्ट र चौधरी निकै बलिया तथा लोकप्रिय छन् ।
कञ्चनपुर: प्रचण्डकी बुहारी विना मगरलाई पति वियोगबापतको सहानुभूति भोट गएन भने कञ्चनपुर १ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने निश्चित जस्तै छ । क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसका एनपी साउद जितको नजिक छन् भने ३ मा रमेश लेखकले आफ्नो जित सुनिश्चित बनाएका छन् ।
Tarun Khabar0response बुधबार,६ मंशिर २०७४ 114 Views